musha > Chitima Kufamba Switzerland > The Beauty Of The Bernina Express
Bernina Express is one of the most beautiful chitima nzendo munyika. Kutanga kwazvose, Pa Rauma Line kubva Dombas kuna Andalsnes (Noweyi), unogona kunakidzwa maonero pamatunhu nenhongonya. Uyezve, unogona kuona dzakatenuka gomo nenzvimbo dzakakwirira sezvo imi kupfuura Rauma River. Mukuwedzera, you can also see Europes highest rock face Trollveggen and the gorgeous huku zambuko.
Where the Bernina Express Train journey begins – Itari
Hunoshamisa mufananidzo Cinque Terre Italy.
Pa Cinque Terre pakati Levanto uye La Spezia (Itari), imi munopfuura mufananidzo-vakakwana mumisha, yemiorivhi, yemizambiringa, and the unforgettable turquoise Ligurian gungwa. The Central Rhine Railway pakati Bingen uye Koblenz (Jerimani) wakafanana chinhu kubva fairytale pamwe nematende yekare pamusoro pemvura.
Zvichida akanaka uye enchanting yevedza njanji tasva mu Europe ndiro Bernina Express. Of all the yevedza Swiss chitima Vatasvi, Bernina ndiyo yakanaka. Izvi nechitima tasva zvinowanika Panoramic maonero kubva Chur & St Moritz kumabvazuva Switzerland nechezasi Tirano kuchamhembe kweItaly. ichi chitima tasva zvinotora anenge 4 maawa sezvo imi kufukidza 90 zvemakiromita kubva pamusoro muaizi kuSwitzerland zuva Italy. rwendo urwu rinobatanidza 55 tunnels uye pamusoro 196 mabhiriji. The njanji rakanga riri pamusoro 120 makore uye ari UNESCO nhaka nyika nzvimbo. The Bernina Express anoudzawo tambo chete Glacier Express uye anofukidza rose Landwasser Viaduct. Pedyo Pontresina, chitima hunokwira kusvikira Bernina Pass, ipapo Morteratsch Glacier. The zvitima yakakwirira yava aidzidzisa Bernina anogarwa pamusoro 7000 tsoka pamusoro pegungwa.
Kune rimwe divi gomo iri, chitima uchipfuura makuru miti asati zvokurega panguva picturesque musha Poschiavo. The chitima ipapo rinobva kurutivi yakakura Brusio Spiral Viaduct. Anenge mapikicha zvose parwendo urwu kutora nzvimbo ikoko.
KuCologne Koblenz Zvitima
Essen kuna Koblenz Zvitima
Mushori kuna Koblenz Zvitima
Heano mamwe anokosha ruzivo kana uri kufunga achitora Bernina Express chitima;
Kana uri parwendo munguva yechando, ari northbound nzira vainyanya nzendo kana zviri murima, saka iwe kusuwa yakawanda nzvimbo dzokuona dzakanaka.
Mukuwedzera, kirasi Second kwazvo zvakanaka nechitima ichi vose zvakafanana mabasa sezvo kirasi yokutanga, saka hapana chikonzero kubhadhara zvimwe mari kana uchida zvishoma zvishoma ungana zvigaro.
Pa southbound chitima, Unoda agere kurutivi rworudyi pamusoro chitima. Sezvo Switzerland girl anogona kuonekwa kubva rwuno. uye pamusoro northbound chitima, uchida kugara kurutivi rworuboshwe-ruoko.
The Panoramic mahwindo huru regai kuvhura. Pane mawindo diki inotevera kuti chitima mikova. Unogona kutora mapikicha enyu kubva kwavari (pasina mufananidzo).
Uri kuronga rwendo pamusoro Bernina Express? Wadii kutora 3 maminitsi uye kuwana isingadhuri chitima matikiti pamusoro www.saveatrain.com . Zadza zuva uye nguva kuti zvaungada kufamba, uye isu achakupa yakanaka mutengo yerwendo, zvinogona mari nenzira akawanda kusanganisira Paypal uye Bitcoin.
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-bernina-express/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel Sweden, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Train Travel Denmark, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Luxembourg, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe